Ngaba kukho uxhulumaniso phakathi kokuziphatha kwenyanga kunye nolwalamano oluthandwayo? Ienkwenkwezi zithi kukho. Makhe sizame ukugqiba ukuba yeyiphi imihla esimele siyenze ngayo, kwaye ngukuphi iintsuku - ukungabonakali, ukunxibelelana namadoda.
Akuyiyo imfihlo kunoma ubani ukuba ukuziphatha kweNyanga kuhambelana ngokuthe ngqo kwiinkqubo ezahlukeneyo ezenzeka kwiplanethi yethu. I-satellite satelite yomhlaba inefuthe elichanekileyo kwintsebenzo ebalulekileyo kunye nenhlalakahle yomntu. Enye yale mimandla, njengoko inye izazi zeenkwenkwezi zithetha, lulamano phakathi kwamadoda nabasetyhini. Yingakho, izazi zeenkwenkwezi zicelwa ukuba ziqwalasele ukuziphatha kwenyanga ekwakheni ubudlelwane obuhlukeneyo, ukwenzela ukuba iminqweno kunye neenjongo zethu zihambelane nefuthe lenyanga ye-biorhythms.
Abantu abaninzi baye bakuva ukuba kukho iingcamango ezinjalo ngeenkwenkwezi njengenyanga, inyanga yenyanga, njalo njalo. Yintoni enokuyenza ukuze i-biorhythms yomntu ihambisane nama-biorhyth yenyanga. Ngoko, inyanga yenyanga ihlukaniswe zibe zigaba ezine: inyanga entsha, inyanga epheleleyo, isigaba sokwanda kwenyanga kunye nenyanga eguqukayo. Xa kufika inyanga entsha, kungcono ukunqaba ukwenza izigqibo ezibalulekileyo nokwakha naziphi na izicwangciso ebomini bakho. Kodwa inyanga epheleleyo iyichasene nexesha, ukugqithisa ngokupheleleyo iimvakalelo zothando. Nangona kunjalo, umntu kufuneka aqikelele, kuba kukho inyanga epheleleyo ukuba inyanga ithintele abantu abaxhomekeke kwiimvakalelo ezigqithiseleyo. Ngoko ke, ngezihlandlo ezinjalo, ingozi iyakwenzeka, ukuxhalabisa kunye nokuxhalaba kuya kwanda ngenxa yezizathu. Zama kwiintsuku ezincinci ukudibanisa.
Ukunyuka kwenyanga kunemiphumo emihle ekuqaleni kwemicimbi emitsha, inyanga egugile ibonisa ukuba lixesha lokunciphisa umsebenzi wakho kwaye ungathathi nantoni na inqwenela.
Ukongeza kuzo zonke ezi ngasentla, ungasebenzisa inxaxheba yoluhlu lweentsuku ezilungileyo apho unokuhlakulela ulwalamano lwakho kwaye uyazi ukuba yonke into iya kuvela.
Ngomhla wokuqala wenyanga ulungele ukuphupha malunga nentanda yakho okanye intanda. Emva kwakho konke, le mini, ukususela kwimihla yamandulo, inomdla kwaye yonke into ocinga ngayo iya kuba yindlela efanelekileyo kakhulu yokuzaliseka.
Usuku lwesibini kufuneka lushiywe ukuhlakulela intuition yakho. Kule mihla ukuba ifinyelele kwisiqhamo sayo. Ukunyamekela kakhulu abantu, ngokukodwa oku kusebenza kumntu wesini esahlukileyo kunye nokuphulaphula ilizwi lakho langaphakathi. Mhlawumbi uya kuba ngumncedisi wakho ngalo mhla kwaye uya kubeka umntu olungiselelwe kuwe.
Imini yesithandathu. Bayiqonda indlela lakho elizayo liza kuphuhliswa ngayo. Ukuba ngeli xesha unako ukufumana isiqingatha kwaye udibanise, ke ngalo mhla uya kuziva ukuba ulindele phambili kulo mntu.
Usuku lweshumi elinanye lenyanga, ngokugqithiseleyo ukhanyisa. Ngeli xesha, umsebenzi wesondo uqala ukukhangela i-outlet kwaye uyabetha isitshixo, ngoko ulungiselele kwangaphambili ixesha lokuqhayisa.
Ngomhla weshumi elinesixhenxe weshumi umntu kufuneka athathe izigqibo ezinzulu aze aqale ishishini elibi. Kulo mhla ukuba imitshato idla ngokudlala. Ukuba ungekho kule - ulwalamano lunokuthi luye kwinqanaba elincinci.
Usuku lwamashumi amabini ananye lwenyanga - qala ukubonisa umsebenzi kunye nomdla ngokumalunga nomntu ongenamdla kuwe. Ngaloo mini, nayiphi na imizamo yokuba sisondele ngakumbi kwinto yokudumisa kwayo yenzelwe impumelelo.
Ewe, ngoku uyazi ukuba iintsuku zokubonisa umsebenzi ukwenzela ntoni ukuba zikhule ngakumbi ekufezekiseni iinjongo zakho, kwaye luhlobo luni lwamanga ukuya ngasezantsi kwaye ungahambanga, ukuze ungabonakali into eyayibe yenzeke. Ngesithoba, ishumi elinesithathu, ishumi elinesihlanu, ishumi elinesithoba, elinamashumi amabini anesithathu nesesithandathu nesithandathu, thintela abantu abaqhelana nabo kunye nezinto zokuzilibazisa, kuba akukho sithembiso senkwenkwezi enhle.
Ukuba ufuna ukufumana uthando lwakho lokwenene, kuya kufuneka utshintshe ubomi bakho. Ngoko qalisa ukwenza njalo ngenyanga. Yenza utshintsho kwimbonakalo, utshintshe iinwele zakho, izimonyo, zithenge iimpahla ezintsha kwaye mhlawumbi -shintsha isitayela. Zikhethe ukutya kwaye ulahlekelwe loo mapaundi angaphezulu okwenza uzive uvuyayo. Okanye ulungiselele umthendeleko ongenamthendeleko, ukuba unomlinganiselo omncinci kwaye ubeka ityala yonke into - uthando olungathandekiyo. Musa ukulibala - okwenza oku kungengowakho wangaphambili, ukuze uzenzele ingqalelo kuwe, kodwa ngokwakho, ukungena ebomini obutsha ngokutsha kunye nokuqala kwiphepha elitsha.
Ukulungiselela kakuhle ikhofi yomhlaba
"Yarina" amaphilisi, isicelo
Uluhlu olucoca amanzi
Ingulube i-steaks neamakhowe kunye ne-Brussels ihluma
Ukuphefumula okuphefumulayo kuyingozi yesifo
Umbono woogqirha malunga nokubhoboza